Eastern Cape Department of Health - UMphathiswa utyelele iPellsrus Kliniki eJeffrey’s Bay
UMphathiswa utyelele iPellsrus Kliniki eJeffrey’s Bay
UMphathiswa wezeMpilo uSindiswa Gomba utyelele iPellsrus Kliniki eJeffrey’s Bay neye yahlaziywa ngamabanjwa.
Olu tyelelo beluyinxalenye yeOutreach kaMphathiswa apho ebenxulumanisa iExco Outreach namaphulo eenkonzo zempilo kwiingingqi apho kuhlanganela isiGqeba Esilawulayo sePhondo. Kweli ityeli, isiGqeba Esilawulayo sihlangene kwiNqila iSarah Bartmaan.
Ngexesha lotyelelo lwakhe, uMphathiswa ubone iziko lempilo elicocekileyo ebelisandula ukupeyintwa ngamabanjwa waseSt. Albans. Iingingqi ezinabantu abafumana unyango kule kliniki zezi zilandelayo: Pellsrus, Ocean View, Wave Crest, Paradise, Ashton Bay, Jeffrey’s Bay Central and Kabeljous.
Inkqubo yeenkonzo zempilo kule kliniki iqulathe oku; EPI, ezempilo zabantwana, inkqubo eyintlanganisela yendlela yokutya esempilweni nelulutho ekukhuleni komntu, eziphathelele kukhulelwa, ezempilo zamanina, iinkonzo zakwaHAST, izigulo ezinganyangekiyo, izigulo ezinyangekayo, iinkonzo zasemayezeni, nezempilo zengqondo.
UMphathiswa uye wahlangana nabameli besigqeba sekliniki, ooCeba, uSodolophu, noSomlomo waseJeffrey’s Bay. OoCeba bavakalise inkxalabo malunga neenkonzo zezempilo kwiNqilana iKouga. Ezi zikhalazo beziquka ukungabikho kweenqwelo zezigulane, ukungabikho kwabaqhubi beenqwelo zezigulane, iinqwelo zezigulane ezichitha ixesha elide ziyokulungiswa, iinkonzo zonyango ezingxamisekileyo zicwezela bucala kwiindlela ezithile ingakumbi ezomhlaba ezikhokelela kummandla iOyster Bay neElnus.
Bekukho nomba womsebenzi omninzi ongekagqitywa ngoogqirha wokutyikitywa kwezibonelelo zikaSASSA zokhubazeko. Abafundisi-ntsapho baphakamise umba wokulinda ixesha elide ekliniki njengoko beshiya abantwana bodwa eziklasini. Abafundisi-ntsapho bebecela ukubekwa phambili. Izinga elixhomileyo labantu abathi bangawasebenzi amayeza ngendlela efanelekileyo baze bagule liye lacaphazelwa njengomcimbi oxhalabisayo.
UMphathiswa uye wazamkela izikhalazo eziphakamisiweyo waze waphendula ngelithi ngezolo uye wahambisa iinqwelo zezigulane eSarah Baartman. Uye wakhankanya ukubaluleka kwabalawuli bemikrozo yemigca yabantu kumaziko wezempilo ukuze abantu bafumane iinkonzo zezempilo zezinga eliphezulu kumaziko wethu.
UMphathiswa uye wagxininisa ukubaluleka kwale kliniki kunikezo lweenkonzo zokuqala zezempilo. Uye wakhuthaza uluntu kunye nezigqeba zoluntu ukuba ibengabo abangqina abasebenzi bezempilo. Uye wathi iiCHW zinexanduva lokufumana nokuhambisa amayeza onyango.
OoCeba bakhuthaze abantu ukuba baxhase iNational Health Insurance. UMphathiswa uye wayiqinisekisa intlanganiso ukuba ukulwa ukubiwa kwamaqwakuqwaku aqulathe iinkcukacha zezigulane, urhulumente ufaka iikhamera kwiindawo apho kukho khona amaqwakuqwaku aqulathe iinkcukacha zezigulane ukuze amaqwakuqwaku aqulathe iinkcukacha zezigulane angabiwa.
UMphathiswa ukwagxininise ukuba kumelwe iyekwe imisebenzi engenguye undoqo. Isidingo sokufunyanwa kwemali yeSebe siye sachaphazelwa. UMphathiswa uGomba uye wathi izikhewu kwizikhundla ezibekelwe imali yokuqesha bucala mazitywinwe ngurhulumente.
USomlomo woMasipala ubambe ngazo zozibini kubo bonke abantu abatyelele iPellsrus Kliniki noMasipala iKouga.
Iguqulelwe: Nkosekaya Hlitane